My World: August 2011
Posted by PhyoPhyo at Tuesday, August 23, 2011 Labels: ပီဂျီ, အက်ဆေး, အတောင်အလက်စုံတဲ့နေ့
အဲဒီတစ်နေ့က အမွှေးလေးတွေမစုံမလင် ကျိုးတို့ကျဲတဲ စုတ်ချွန်းချွန်း၊ ငှက်မဲလေးတစ်ကောင် အိမ်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ နဲရှော ယူလာတာပေ့ါ။ အပြင်ကပြန်လာတဲ့နဲရှောက စက္ကူပုံးလေးကို ရင်ဘတ်ဆီမှာ ပွေ့ထားပြီး အိမ်ခန်းထဲဝင်လာတယ်။ သူ ဖွင့်ပြတယ်။ “ဒီမှာကြည့်ပါဦးတဲ့” အိုး သနားစရာ ခေါင်းနဲ့ လည်ပင်းတစ်ဝိုက်မှာ အမွှေးလေးတွေမရှိရှာဘူး။ ရင်ဘတ်နေရာဆီမှာလည်း ပြောင်သလင်းခါလို့၊ ရင်ဘတ်လေးက နိမ့်ချည်မြင့်ချည်၊ မျက်လုံးလေးက ပြူးပြူးပြာပြာ။ သူ ဘာတွေများ ထိတ်လန့်နေပါလိမ့်။ ကျွန်မ က ဘာငှက်လည်း မေးလိုက်တော့ ခိုလေးလေတဲ့။ နဲရှောကဖြေတယ်။ “အသိုက်ပေါ်က ပြုတ်ကျနေတာထင်ပါရဲ့ကွာ၊ စင်္ကြန်လူသွားလမ်းမှာ ကျနေတာ။ လူတွေကဖြတ်သွားဖြတ်လာများပါဘိနဲ့။ အမြဲအလျင်လိုနေကြတဲ့လူတွေက ခိုသေးသေးတစ်ကောင်ကို ဂရုမစိုက်နိုင်အားဘူးကွဲ့၊ ကိုယ်တော့မနေနိုင်လို့ အနားက အသိဆီက ကတ်ပုံးတစ်ခုတောင်းပြီးထည့်လာတယ်ကွာ၊ မဟုတ်ရင် သူသေသွားလိမ့်မယ်” တဲ့။
ကျွန်မ သနားကြင်နာစွာ ခေါင်းလေးကို တို့ကြည့်လိုက်တော့ သူက အသံသေးသေးလေးနဲ့ အော်ပြီး နောက်ကိုဆုတ်ပြေးတယ်။ ကတ်ပုံးသေးသေးလေးထဲမှာ ရသလောက် လှည့်ပတ်ပြေးနေတော့တာပေါ့။ “မကြောက်နဲ့၊ မကြောက်နဲ့ ငါ သာသာလေးတို့ကြည့်ရုံပါ” လို့ ပြောလည်း သူကတော့ မျက်လုံးပြူးပြူးလေးနဲ့ ကျွန်မကိုကြည့်ရင်း ကြောက်ရွံ့နေတာပါပဲ။
We'll be by your side
Posted by PhyoPhyo at Monday, August 15, 2011 Labels: သိပ်ကြိုက်တဲ့သီချင်းတွေ
FB မှာ Bob Marley ရဲ့ wall ပေါ်က တွေ့ခဲ့တဲ့သီချင်းလေးပါ။ တတ်နိုင်ရင်တော့လှူချင်ပါတယ်။
I'm gonna be your friend,
စောင်းကြိုးခတ်သံ ညံတော့မယ့် ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးကေဘယ်လ်တံတား
Posted by PhyoPhyo at Sunday, August 14, 2011 Labels: ခရီးသွားဆောင်းပါး, စောင်းကြိုးခတ်သံ ညံတော့မယ့် တံတား
ဆားဘီးယားနိုင်ငံ၊ မြို့တော်ဘဲလ်ဂရိတ်မှာ ဆောက်လုပ်နေတဲ့ ဆာဗာတံတားကြီးဆောက်လုပ်ရေးအပိုင်းတွေကို အများပြည်သူကြည့်ရှုနိုင်စေဖို့ သြဂုတ်လ ၁၃ရက်နဲ့ ၁၄ရက် နှစ်ရက်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ အာဒါကန်နဲ့နီးနေလို့ အာဒါတံတား ဒါမှမဟုတ် ဆာဗာမြစ်ကို ဖြတ်ပြီးဆောက်လုပ်ထားလို့ ဆာဗာတံတားလို့ ယာယီအမည်ပေးထားပြီး ၂၀၀၈ခုနှစ်က စတင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ တံတားအရှည်က ၉၉၆မီတာရှည်လျားပြီး အကျယ်က ၄၅.၅ မီတာ ကျယ်ပါတယ်။ စုစုပေါင်း ယူရို သန်း ၃၂၀ ခန့် ကုန်ကျမယ်လို့ တွက်ချက်ထားကြတယ်။ ကွန်ကရစ်တိုင်လုံးပေါင်း ၁၆၅,၀၀၀ ရှိပြီး စတီးတွေနဲ့တပ်ဆင်ထားတဲ့ ကေဘယ်လ်တံတားအမျိုးအစားပါ။ အဲဒီတံတားကနေ လမ်းသုံးလမ်းနဲ့ ဓါတ်ရထားလမ်းတစ်လမ်း ဆက်သွယ်ပါလိမ့်မယ်။ တံတားပြီးသွားခဲ့ရင် အာဒါဆီဂန်လီယာကျွန်းရဲ့ထိပ်ပိုင်းကို ဖြတ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဘဲလ်ကန်စစ်ပွဲတွေမတိုင်ခင်တုန်းက ဆားဘီးယန်း-ယူဂိုဆလဗ်မှာ ကေဘယ်လ်တံတားဆောက်လုပ်ရေးမှာ ကျွမ်းကျင်မှုကြောင့် လူသိများကျော်ကြားလှတယ်လို့ဆိုတယ်။ နေတိုးတပ်ဖွဲ့ ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်မှုအပြီး အထင်ကရတံတားတွေ ပျက်စီးခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း ဆားဘီးယန်းအင်ဂျင်နီယာတွေက အရင်ကတည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းမရှိသေးတဲ့ တံတားမျိုးတည်ဆောက်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ ကမ္ဘာမှာအရှည်ဆုံး ကေဘယ်လ်ကြိုးတံတားတွေမှာထောက်ပံ့မျှော်စင်တိုင်လုံးနှစ်ခု ဒါမှမဟုတ်သုံးခုရှိကြပေမယ့် အခုတံတားမှာတော့ တိုင်လုံးတစ်ခုထဲနဲ့ တည်ဆောက်ထားပြီး မီတာ ၂၀၀ မြင့်ပါတယ်။ ဆားဘီးယားရဲ့ အမြင့်ဆုံးတံတားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပြီး အာဗာလာရုပ်သံလွှင့်မျှော်စင်က ငါးမီတာနိမ့်ပါတယ်။ တံတားတည်ဆောက်ရေးပိုင်းမှာ ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းပြီးစီးနေပါပြီ။ အဓိကတိုင်လုံးတည်ဆောက်ပြီးစီးခဲ့ပြီး ပင်မတံတားဆက်ပိုင်းတစ်ပိုင်းဆောက်လုပ်ဖို့ပဲ ကျန်ပါတော့တယ်။ ခွင့်ပြုထားတဲ့နှစ်ရက်အတွင်း တံတားကြီးကို ဘဲလ်ဂရိတ်မြို့သားတွေက အောင်ပွဲတစ်ခုလို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သွားကြည့်ကြပါတယ်။
၁၄ရက်နေ့ကတော့ ညနေခင်း၆နာရီလောက် တံတားကြီးဆီရောက်သွားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
Posted by PhyoPhyo at Wednesday, August 10, 2011 Labels: နိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်းပါးများ
လန်ဒန်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အဓိကရုဏ်းတွေကြောင့် နယ်သာလန်နဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချစ်ကြည်ရေးပွဲ ရက်ရွှေ့လိုက်ရပြီးနောက် ၀ိန်းရွန်းနီ နဲ့ ရီယိုဖာဒီနန်အပါအ၀င် အင်္ဂလန်ဘောလုံးသမားတွေက လန်ဒန်မှာ ငြိမ်သက်အေးချမ်းစေဖို့ မေတ္တာရပ်ခံလိုက်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်ဘောလုံးအဖွဲ့(FA) က လန်ဒန်မြောက်ပိုင်းဝင်ဘလေကွင်းမှာ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကစားမယ့်ပွဲအတွက် မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ အဓိကရုဏ်းတွေသုံးရက်ကျော်ကြာလာခဲ့ပြီးနောက် ကြေညာခဲ့တယ်။ ဈေးဆိုင်တွေလုယက်တိုက်ခိုက်ခံရတယ်။ လူငယ်တွေပါဝင်တဲ့ဂိုဏ်းသားတွေ တိုက်ခိုက်နှောင့်ယှက်မှုတွေကြောင့် ရဲအရာရှိတွေပစ်ခတ်နှိမ်နင်းတာတွေရှိလာခဲ့တယ်။ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်အရဲကိုးကြမ်းတမ်းနေကြတဲ့လူငယ်တွေရဲ့ မူမမှန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာ လန်ဒန်မြို့တော်ရဲ့ အနည်းဆုံးခြောက်နေရာလောက်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြတယ်။ အကြမ်းဖက်မှုတွေက တစ်ခြားမြို့တော်တွေဆီကိုပါ ပျံ့နှံ့ကုန်ကြတယ်။ ဘာမင်ဂန်စီးတီးက ဆိုင်တွေရဲ့ မှန်တံခါးတွေကို လူငယ်တွေက အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာကွဲကြေစေခဲ့တယ်။ အဲဒီနေရာက ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာကစားမယ့်ပွဲအတွက် အင်္ဂလန်ခရစ်ကက်စားသမားတွေရှိနေကြတဲ့နေရာနဲ့ မဝေးလှပါဘူး။ လန်ဒန်ရဲတွေရဲ့ အကြံပြုချက်အတိုင်း လုံခြုံရေးအတွက် ဘောလုံးပွဲတွေကို ရပ်နားထားလိုက်ရတယ် လို့ FA က ပြောပါတယ်။ လန်ဒန်မြောက်ပိုင်းမှာ နိုင်ဂျီးရီးယားနဲ့ကန်မယ့် ဂါနာချစ်ကြည်ရေးပွဲကိုလည်း ပယ်ဖျက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။
“ကျွန်တော်တို့ မနက်ဖြန်ပွဲအတွက်ဖျက်လိုက်ရလို့ စိတ်ပျက်မိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ရဲ့နောက်ကွယ်က အကြောင်းပြချက်တွေကို ကျွန်တော်တို့ နားလည်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အထောက်အပံ့ပေးရပါမယ်” လို့ အင်္ဂလန်ဘောလုံးစတားတွေက သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ ပြောထားပါတယ်။ “ကျွန်တော်တို့အာလုံး ကြောက်စရာလန့်စရာပုံတွေ တီဗီမှာမြင်နေရတယ်။ အရေးကြီးဆုံးက ပရိသတ်တွေရယ်၊ လူတွေအားလုံး ဘေးကင်းလုံခြုံဖို့ပါပဲ။ ဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ အသင်းသားတွေအားလုံးမေတ္တာရပ်ခံချင်တာက ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနေကြဖို့ရယ် မူမမှန်တဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်တွေမလုပ်ဖို့ပါပဲ”လို့ ပြောကြတယ်။
ပုံတူကူးချခဲ့တဲ့ လန်ဒန်က အဓိကရုဏ်းတွေ
Posted by PhyoPhyo at Tuesday, August 09, 2011 Labels: နိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်းပါးများ
လန်ဒန်မြောက်ပိုင်းမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ကြာသပတေးနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အသက် ၂၉နှစ်အရွယ် မာခ့်ဒတ်ဂန်ရဲ့သေဆုံးမှုအပြီး အခြေအနေတွေက ရှုပ်ထွေးနေပါတယ်။ မှန်းဆသုံးသပ်ချက်တွေအမျိုးမျိုးပေးနေကြတယ်။ အငှားကားတစ်စီးမှာ စီးနင်းလာခဲ့တဲ့ဒတ်ဂန်ကို ရဲတပ်ဖွဲ့ကပစ်ခတ်ခဲ့ပြီး ဒတ်ဂန်သေသွားခဲ့တော့ အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာ အဓိကရုဏ်းတွေ၊ လုယက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာ လန်ဒန်မြို့ကြီးတစ်ဝိုက် ကူးစက်ပျံ့နှံကုန်ကြတယ်။ အဲဒီနေ့က လန်ဒန်လူမည်းရပ်ကွက်အတွင်း လက်နက်ကိုင်ပြစ်မှုကျူးလွန်ဖို့ စီစဉ်နေစဉ် လန်ဒန်ရဲတပ်ဖွဲ့ Operation Trident က ရဲအရာရှိတွေက မသင်္ကာစရာအငှားကားကို ရပ်တန့်စေခဲ့တယ်။ ရဲက ဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားခဲ့ရာက တခဏလေးအတွင်း သေနတ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ် လို့ Independent Police Complaints Commission (IPCC) ကပြောပါတယ်။ ကလေး လေးယောက်ရဲ့ဖခင် ဒတ်ဂန်ဟာ ဒဏ်ရာအပြင်းအထန်ရရှိခဲ့ပြီး သေဆုံးသွားခဲ့တယ်။ စနေနေ့ညနေမှာတော့ အဓိကရုဏ်းတွေအတွင်း လူပေါင်း ၂၁၅ဦးကို ဖမ်းဆီးလိုက်ပြီး ၂၇ဦးကို စစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ အဓိကရုဏ်းကနေ အိမ်ပြန်စောသွားခဲ့တဲ့ ဗြိတိန်အိုးအိမ်ဌာနအတွင်းရေးမှူးထရ်အီစာမေက ပြောပြခဲ့တယ်။ ရဲအရာရှိ ၃၅ ဦးကျော်ဒဏ်ရာရခဲ့ကြတယ်။
I diedahundred times !!!
Posted by PhyoPhyo at Tuesday, August 02, 2011 Labels: သိပ်ကြိုက်တဲ့သီချင်းတွေ
အရင်ကနားထောင်ဖူးတဲ့ Back to black သီချင်းကို ပြန်နားထောင်ရင်း စိတ်မကောင်းဖြစ်နေမိတယ်။ ဘဲလ်ဂရိတ်ကို မကြာသေးဘူး၊ လာသွားသေးတယ်။ သီချင်းကောင်းကောင်းမဆိုဘူးဆိုပြီး နဂိုထဲက သွေးဆူတတ်ကြတဲ့ ဆားရ်ဘီးရန်းလူငယ်တွေက အော်ဟစ်ပြစ်တင်ခဲ့ကြတယ်တဲ့။ အေမီဝိုင်ဟောက်စ်ဘက်ကလည်း ဆားရ်ဘီးယန်းပရိသတ်တွေကို အပြစ်တင်ခဲ့တယ်။ နောက်သတင်းတွေမှာကြည့်ရတယ်။ ဘဲလ်ဂရိတ်က ကောင်မလေးနှစ်ယောက်က fbမှာ အေမီဝိုင်ဟောက်စ်ကို ဆန့်ကျင်တဲ့gruop တစ်ခု လုပ်ခဲ့ကြသေးတယ်တဲ့။ ခုတော့ အေမီဝိုင်ဟောက်စ်သေဆုံးသွားခဲ့ပြီပဲ။ သေဆုံးခြင်းနောက်မှာ အပြန်အလှန် အပြစ်တင်တာတွေရပ်သွားခဲ့ပြီး သနားကြင်နာခြင်းတွေဖြစ်ခဲ့ကြရပါပြီ။ ဘဲလ်ဂရိတ်မှာဆိုသွားတဲ့ Back to Black သီချင်းပြန်ကြည့်မိတိုင်း ဘဲလ်ဂရိတ်ကလူငယ်တွေလည်း စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြမှာပါပဲ။ ပြစ်တင်ကျိန်းမောင်းမှုတွေရပ်တန့်ဖို့ သေဆုံးခြင်းတွေက တကယ်ပဲ အသုံးဝင်နေတာလားပဲ။ အေမီဝိုင်ဟောက်စ်က အကြိမ်တစ်ရာသေဆုံးခဲ့ပါတယ်တဲ့။
ဒီလိုသာဆို ဒီတစ်ခါ သေဆုံးခြင်းကတော့ သူ့အတွက် တစ်သက်တာငြိမ်းချမ်းတဲ့ကောင်းကင်ဘုံကိုပဲ ဖြစ်မှာပါပဲ။ ။
R . I . P Amy Winehouse !
And I go back to black !!!
စောင်းကြိုးခတ်သံ ညံတော့မယ့် ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးကေဘယ်လ်...